Hargeysa: Wax badan ka Ogow Ubucda Sheekada Gabadha uu Tacaddiga Jinsi u Geystay Masuulka ka tirsan Wasaaradda Daakhiliga iyo Xogo kale | Salaan Media
Hargeysa: Wax badan ka Ogow Ubucda Sheekada Gabadha uu Tacaddiga Jinsi u Geystay Masuulka ka tirsan Wasaaradda Daakhiliga iyo Xogo kale
March 14, 2020 | Published by: Hamse
Waxa Labadii maalmood ee u dambeeyey si toos ah u soo if-baxay Sheeko maqalkeedu ka fejecisay bulshada qaybaheeda kala duwan, balse nooceeda oo kale ku badan tahay goobaha, meheradaha iyo xafiisyada Shaqooyinka kala duwan ee dalka oo inta badan in bannaanka la soo dhigaa ay adag tahay hadday tahay cidda loo geysto iyo ciddii warkeeda mashaqaba.
Sheekadana waxa bannaanka soo dhigay oo sida ay u dhacday iyo tabashada gabadha iyo cidda geysatay oo magaceeda la qariyey baraha bulshada ku soo dhigay nin dhalinyaro ah kana mid ah Aqoonyahanka da’da yar ee dalka oo lagu magacaabo Ismaaciil C Ubax oo marka la eego qaabka uu xogta u soo gudbinayo ka dhigan inuu aqoon u leeyahay oo xogta dhacdada qabsaday la wadaagtay gabadha sheegatay tacaddiga uu u geystay masuulka ka tirsan wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Somaliland.
In kasta oo Qofka xogta dhacdadan soo gudbiyey, Ismaaciil C Ubax, hadda ku sugan yahay dalka dibaddiisa oo uu dhawaan u baxay, waxa uu ka sheekaynayaa xogta gabadhan iyo sida ay ku bilaaban tahay sheekada dhexmartay masuulka ay ku eedaysay inuu gabbood-falka Jinsiga ah u geystay.
Waxa uu ismaaciil taxana sheekadan baraha bulshada ku xidhiidho ku baahinayey Afartii Cisho ee u dambaysay oo arrintani bannaanka u soo baxday, isagoo taxanaha sheekadan oo saddex qaybood uu u qaybiyey ugu magac-daray “QAYLA-DHAAN DUMAR”.
Qaybta 1aad ee taxanaha sheekada ku saabsan gabadhan waxa uu Ismaaciil Baahiyey 11-kii Bishan oo ku beegnayd Arbacadii todobaadkii hore abbaaro 7:50 Fiidnimo. Ka hor intii aanu bilaabin daadihinta qisadan, waxa uu Ismaaciil bartiisa Facebook ku baahiyey qoraal uu kaga hadlayo tacaddiyo ay Gabdhaha da’da yari kala kulmaan xafiisyada ay ka shaqeeyaan ama goobaha waxbarasho ee ay ku jiraan, isagoo codsaday in cid kasta oo dhacdo noocan ahi ku dhacday la soo xidhiidhaan, isaguna uu ballan-qaadayo inuu xogtaas bulshada la wadaagi doona, magaca qofka ay ku dhacday iyo macluumaadka la xidhiidhana uu asturi doona.
Ka hor inta aynaan u gelin bilowga Qisada gabadha, Qoraalka Codsiga iyo War-gelinta ah oo uu baahiyey Abbaaro 2:39 Duhurnimo Isla 11kii March, 2020-kii, waxa uu Ismaaciil ku yidhi, “Dumarka shaqeeya iyo hablaha wax bartaa waxay inta badan ragga ay la shaqeeyaan kala kulmaan xadgudub hadal iyo ficilba ah oo ku aaddan dumarnimadooda, ama ha noqoto shukaansi aan habboonayn ama ficil kale oo iskuday xadgudub ah. Tusaale ahaan gabadh ayaa mar igu tidhi, ”Boss-kaygu wuxuu si cad iigu yidhi anaa ku dallacsiinayee, aan kulanno.” Mid kale waxay sheegtay in mushaharkeeda ay rafaad u marto bil kasta si ay u hesho xaqeeda. Hablaha qaar ayaa macallinkooda kala kulma xadgudub isaga oo u ballanqaadaya dhibco ay xaq u leedahay. Ma jiraan dhacdooyin noocaas ah oo aad ila wadaagi karto? Waan qarin doonaa magacaaga iyo xogaha kale oo dhan, deedna dadka ayaan dib ula wadaagi doonaa. Fadlan iigu soo hagaaji farriin ahaan. Wuxuu noqon doonaa taxane, magac ku habboonna hoos igu la wadaag haddii aad hayso.”
Guji halkan si aad uga bogato Sheekada oo dhammaystiran